Seddex Ciyaaryahan Oo U Tartameysa Inay Lionel Messi Ka Bedelaan Shaxda Barcelona Haddii Uu Taam U Noqon Waayo Kulanka La Liga. - Wargane News
Home Sports Seddex Ciyaaryahan Oo U Tartameysa Inay Lionel Messi Ka Bedelaan Shaxda Barcelona...
Haddii ugu danbeyn tababare Luis Enrique, Lionel Messi iyo dhakhaatiirta kooxda Barcelona ay go’aansadaan in xalka ugu fiican ee dhaawac gumaarka ee ciyaaryahanka uu yahay inuu ka dhisto kulanka horyaalka La Liga Alaves, waxaa jiri doonta dood ku saabsan cida booskiisa buuxin doonta.
Luis Enrique waxaa u furan wadooyin badan, waxaana ka mid ah weeraryahankii hore Valencia Paco Alcacer, iyadoo xiddiga reer Spain uu lacag badan ku soo wareegay xagaagan.
Caqabad ayaase hoortaagan oo ah inuusan la weli la qabsanin kooxdiisa cusub madaama uu haatan la maqan yahay xulka Spain, tan labaadna waxa ay tahay in booskiisa caadiga uu yahay booska No. 9 ee uu Luis Suarez ka ciyaaro.
Dooqa labaad waxaa noqon kara Arda Turan, waxa uu ka ciyaaray garabka bidix ee weerarka xilli ciyaareedkan laakiin iyadoo uu Neymar soo laabtay waxa uu ka ciyaari karaa garabka midig ka dib qaab ciyaareedkii fiicnaa ee uu soo bandhigay.
Doorashada seddexaad waa Rafinha. Xiddiga reer Brazil ayaa boosas badan ka ciyaari kara, Luis Enrique ayaana ku kalsoon ciyaartiisa. Rafinha ayaa bedel ku soo galay kulankii Athletic Bilabo ee isbuucii hore.